Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Mexico
Ihe A Na-eme n’Ụlọ Ọrụ Anyị na Oge E Ji Aga Elegharị Anya Ebe Ahụ
Obi ga-adị anyị ụtọ ma ị gaa legharịa anya n’ụlọ ọrụ anyị dị iche iche nakwa n’ebe ndị anyị na-ebi akwụkwọ. Ebe a ka ị ga-anọ achọpụta ebe ụlọ ọrụ anyị dị na oge ndị ọbịa ji aga elegharị anya ebe ahụ.
Họrọ Mba/Obodo Albania Angola Argentina Australia Belgium Benin Bolivia Brazil Britain Bulgaria Burundi Cameroon Canada Central African Republic Chile Colombia Côte d’Ivoire Croatia Denmark Dominican Republic Ecuador Ethiopia Fiji Finland Georgia Germany Ghana Guam Haiti Hong Kong Hungary India Indonesia Italy Japan Kazakhstan Kenya Korea Kyrgyzstan Liberia Macedonia Madagascar Malawi Mexico Moldova Mozambique Myanmar Netherlands New Caledonia Nigeria Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Romania Rwanda Senegal Serbia Sierra Leone Slovakia Slovenia Solomon Islands South Africa Spain Sri Lanka Suriname Tahiti Taiwan Thailand The Democratic Republic of the Congo Trinidad and Tobago Uganda Ukraine Venezuela Zambia Zimbabwe
Ave Jardin No. 10
Fraccionamiento El Tejocote
56239 TEXCOCO, MEX
Oge E Ji Akpọgharị Ndị Ọbịa
Mọnde ruo Fraịdee
8:00 ụtụtụ ruo 11:00 ụtụtụ na 1:00 ehihie ruo 4:00 mgbede
Ọ na-ewe awa abụọ na ọkara
Ihe A Na-eme
A na-asụgharị akwụkwọ anyị ndị e ji amụ Baịbụl n’asụsụ iri anọ na itoolu a na-asụ n’obodo ndị dị malite na Mexico ruo na Panama. A na-ebikwa akwụkwọ anyị n’ihe karịrị asụsụ iri isii, na-ezipụkwara mba iri akwụkwọ anyị n’ihe karịrị asụsụ iri asatọ.
Danloduo akwụkwọ ga-akọkwuru gị ihe ndị ọzọ.
Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Dị na Mexico